မှာရော့ Paton, မှာစာရေးသူ Brick Fanatics
Author: ရော့ Paton
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ရော့ Paton 168 Views စာ0မှတ်ချက် 21318 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, ရဲတိုက်, Lego, Lego ရဲတိုက်, Lego Ideas, စကခ, ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, ရေနံချောင်း, ပြန်. ဆောက်လုပ်
09 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ရော့ Paton 315 Views စာ0မှတ်ချက် 76023 အဆိုပါ Tumbler, 76240 Batmobile Tumbler, Batman, Batman စတင်ခဲ့သည်, Dc, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego, DC ရုပ်ပြစူပါသူရဲကောင်းများ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, reviews, The Dark Knight ဟာ, The Dark Knight ဟာ Rises, tumbler
08 / 09 / 2021 09 / 09 / 2021 ရော့ Paton 257 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၉၆၉ Fiat 10271, 31058 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, 60215 မီးသတ်စခန်း, 77940 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, 77941 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, ၁၉၆၉ Fiat 77942, ၇၇၉၄၃ မီးသတ်စခန်း Startသတ်မှတ်မည်, ၇၇၉၄၄ မီးသတ်စခန်းဌာနချုပ်artအဖွင်, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Lego, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, reviews, အဆိုပါ LEGO Group
08 / 09 / 2021 08 / 09 / 2021 ရော့ Paton 218 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၉၆၉ Fiat 10271, 31058 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, 60215 မီးသတ်စခန်း, 77940 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, ၇၇၉၄၁ တန်ခိုးကြီးဒိုင်နိုဆော, ၁၉၆၉ Fiat 77942, ၇၇၉၄၃ မီးသတ်စခန်း Startသတ်မှတ်မည်, ၇၇၉၄၄ မီးသတ်စခန်းဌာနချုပ်artအဖွင်, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Lego, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, သူ Mike Psiaki, reviews, အဆိုပါ LEGO Group
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ရော့ Paton 286 Views စာ0မှတ်ချက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, ဘာစီလိုနာ, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, LEGO ဘာစီလိုနာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, Lego GWP, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, မက်ဆီ, reviews
01 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 ရော့ Paton 438 Views စာ0မှတ်ချက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, ဘာစီလိုနာ, စခန်း Nou, ကာတာလ, Catalonia, Creator Expert, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, Lego, Lego Creator Expert, LEGO ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO အားကစားကွင်း, Lionel Messi, မန်ချက်စတာယူနိက်တက်, မက်ဆီ, မန်ယူအသင်း, reviews, စပိန်
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ရော့ Paton 305 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 75183: Dartဇ Vader ပြောင်းလဲခြင်း, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, Dartဇ Vader, အထွေထွေ Veers, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, reviews, Star Wars, Star Warsဖြေ - အင်ပါယာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်, အင်ပါယာသို့ပြန်သွားရန်ကိုရို, အဆိုပါ LEGO Group
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 410 Views စာ0မှတ်ချက် AT-AT ကို AT Walking 10178, 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, 4483 ကို AT-AT, 75313 ကို AT-AT, 7662 ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် MTT, အမေဇုံ, AT-AT, Lego, Lego Power Functions, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Power Functions, reviews, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 383 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey